यस्ता खानाको कारण अनुहारमा डंडीफोर आउन सक्छ हेर्नुहोस के के हुन ती खाना ? – Sanjal Nepal
Homeस्वास्थ्य /जिबनशैलीयस्ता खानाको कारण अनुहारमा डंडीफोर आउन सक्छ हेर्नुहोस के के हुन ती खाना ?
December 22, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 3122
December 28, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 3385
काठमाडौँ । सबै खालका बिराम चैट गर्नुछ । आज हामीलाई ध्यान दिनुहोस् । तपाईका लागि यो सामाग्री बहुउपयोगी हुन सक्छ । हामी सबैलाई थाहा छ की मानव शरीरलाई स्वास्थ्य बनाउनको लागि, शुद्ध रगत हाम्रो शरीरमा
गुप्तांगको दुर्गन्धले चिन्तित हुनुहुन्छ ? घरेलु विधिबाट यसरी गर्नुस् उपचार
December 26, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 6731
एजेन्सी- गुप्ताङ मानिसका अत्यान्तै गोप्य र संवेदनशील अंगहरु हुन् । यही भएका कारण धेरै मानिस गुप्ताङका बारेमा खुलेर कुरा गर्न रुचाउँदैनन् । कतिपय त लाजकै कारण पनि गुप्ताङमा हुने समस्याहरुलाई सहेर बसिरहेका हुन्छन् । शरीरभित्र
November 19, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 11781